စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်ဒီတပတ်ကိုစတင်ရန်ဂိမ်း ၅ ခုနှင့်လျှောက်လွှာများ Androidsis ပါ
ဟိုဆေး Alfocea | | Android application များ, Android ဂိမ်းများ
ငါတို့က androidsis မှာနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ၊ android ဂေဟစနစ်ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ၊ စမတ်ဖုန်းအသစ်တွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေ၊ နှိုင်းယှဉ်မှုတွေ၊ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ၊ ဂိမ်းတွေအများကြီးနဲ့ application တွေအများကြီးကိုအကြံပေးနိုင်သလို၊ ၎င်းမှသင်၏ကိရိယာများကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါ။
ဒီအပတ်မှာငါတို့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုနဲ့စတယ် Android အတွက်ဂိမ်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များ အထူးသဖြင့်အားလပ်ရက်ခရီးမသွားလျှင်၊ သင်အနားယူရန်နေရာသို့ရောက်နေပြီ၊ အတွေ့အကြုံသစ်များကိုရှာဖွေနေလျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့စရမလား။
2 Paranormal နယ်မြေတွေကို 2
3 Hadjane ပြောတာက RPG!
မင်းကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုကောင်းကောင်းကောက်ချက်ချတာဖြစ်နိုင်သလို၊ Plexchat သစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် chat app ၎င်းသည်ကစားသမားများအပေါ်အာရုံစိုက်သော Discord၊ Skype နှင့်အခြားချတ်များ၏ကောင်းမွန်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်သင်သင်ကစားနေသောဂိမ်းအုပ်စုအတွက် Plex ဟုခေါ်သော "အချက်အချာ" အမျိုးအစားတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ သူ့မှာရှိတယ် ခွင့်ပြုချက်အဆင့်ဆယ်ဆင့်moderators များသည်ပိုမိုထိရောက်သောထိန်းချုပ်မှုကိုကျင့်သုံးနိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်သည်။ မင်းကစားနေတဲ့ဂိမ်းတွေအကြောင်းကိုအများသုံးအဲလက်စ်နဲ့တောင်သင်ပူးပေါင်းနိုင်တယ်။
ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အတန်ငယ်နှေးကွေးသော application တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုစမ်းသုံးကြည့်ပြီးဤအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သိသောသူများက၎င်းသည်ကြီးမားသောအလားအလာရှိကြောင်းသေချာသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင်ကြိုးစားပြီးမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်သင့်သော app တစ်ခုဖြစ်သည်။
Plexchat ကြော်ငြာများ (သို့) အက်ပ်အတွင်း ၀ ယ်ယူမှုများမပါသောအခမဲ့ application တစ်ခုဖြစ်သည်။
Paranormal နယ်မြေတွေကို 2
Paranormal နယ်မြေတွေကို အသစ်တစ်ခု ပဟေိအခြေခံထိတ်လန့်စရာဂိမ်းမရ။ ၎င်းသည်ကွဲပြားပြီးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအပြုအမူများကိုပြသသောအရာများပါ ၀ င်သောအိမ်ကိုအခြေခံသောရိုးရှင်းသောဂိမ်းဖြစ်သည်။ ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့သတင်းကိုမင်းလက်ခံရရှိလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ကတော့အိမ်ကနေအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ဖို့ဘဲ။
ငါပြောသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော်လည်းပျော်စရာကောင်းသောကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကင်းစင်ဆုံးကိုကြောက်လန့်စေပြီးစျေးသက်သက်သာသာဖြင့် ၀ € ၀.၅ သာပေးသည်။
Hadjane ပြောတာက RPG!
Hadjane ဘာပြောတယ်။ Kemco မှတီထွင်ခဲ့သော RPG အသစ်တစ်ခုသည်သင်ထိုသူများ၏ပုန်ကန်မှုကိုခံနေရသောမြေအောက် "သူဌေး" Hadjane ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုယူဆလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ၎င်းတို့ကိုပင်လယ်အော်တွင်ထားပြီးနေရာအားမည်သူတာဝန်ယူကြောင်းပြရန်ဖြစ်သည်။ အဲဒါအကြောင်းတစ်ခုပေါ့ အလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အလွန် retro ဂရပ်ဖစ်များဖြင့် RPG မတူညီသောအတားအဆီးများကိုကျော်လွှား။ ကွဲပြားသောအောင်မြင်မှုများကိုသင်နည်းနည်းချင်းတိုးသွားရမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်တိုးတက်လာသောအခက်အခဲနှင့်အတူအဆင့်တစ်ခုမှတစ်ဆင့်သို့တက်လိမ့်မည်။
ကစားရန်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည် Hadjane ဘာပြောတယ်။ € ၄.၉၉ သာကျသင့်သော်လည်းစျေးနှုန်းရှိသော်လည်း၎င်းသည်သင်၏ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေမည့် app အတွင်းကြော်ငြာများနှင့် ၀ ယ်ယူမှုများပါ ၀ င်သည်။
[Premium] RPG Hadjane ပြောတာကသွားသည်!
DeAMPify တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် app သည် Google ၏ AMP project ကိုအာရုံစိုက်သည်မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာတစ်ခုတွင် web page များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာတင်နိုင်စေသောပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာကိုပြောတာလဲ DeAMPify es AMP ဗားရှင်းစာမျက်နှာများထက်မူရင်းဝဘ်စာမျက်နှာများကိုဖွင့်ပါ ဤအပိုင်းများနှင့်အတူဥပမာများ၊ မှတ်ချက်ကဏ္disappearများသည်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
Google အက်ပ်တွင်ရှာဖွေသော link များ (သို့) Twitter၊ Hangouts၊ Messages စသည့်အခြားအပလီကေးရှင်းများတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်း Chrome browser ကိုသုံးနေရင်တော့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
အဆုံးစွန်အားဖြင့်သင် AMP ကိုမကြိုက်ပါက၎င်းကိုကျော်လွှားရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အခမဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သောအခြေခံဗားရှင်းရှိပြီးကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားသောအခြားလိုလားသောဗားရှင်း၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုစာရင်းနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။
ပြီးတော့ငါတို့ကဒီအပတ်ကိုညာခြေနဲ့လျှောက်ဖို့ဒီအပလီကေးရှင်းအသစ်တွေနဲ့ဂိမ်းတွေကိုပြီးအောင်လုပ်မယ် စည်သူလွင်, un ဂီတနှင့်ရစ်သမ်ဂိမ်း ဤအပလီကေးရှင်းအမျိုးအစားများတွင်လူကြိုက်များသောနည်းပညာ၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့်ဆင်တူသောစည်းချက်များကိုသုံးမည့်အစား၎င်းတို့ကိုရှောင်ရှားသည်။ ဂန္ထဝင်ဂီတကိုနှစ်သက်သည်မရ။ ၎င်းသည်သီချင်းမျိုးစုံ၊ အမြန်နှုန်းသုံးမျိုး၊ အခက်အခဲအဆင့်အမျိုးမျိုးနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။ သူ့ရဲ့စက်ပြင်တွေကနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကဒီဂိမ်းအမျိုးအစားကိုကြိုက်ရင်အရမ်းပျော်စရာကောင်းတာပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ဂိမ်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခုသည်စိတ် ၀ င်စားမှုဖြင့်စတင်ပါ